I Paneya @Anderson Apartment - I-Airbnb
I Paneya @Anderson Apartment
Kecamatan Sambikerep, Jawa Timur, i-Indonesia
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Harry
U-Harry Ungumbungazi ovelele
Sawubona, ngingu-Harry. Ngingumnikazi & umphathi we-Paneya @Anderson Apartment. Indawo ecebe kakhulu, etholakala ezulwini lokuthenga le-Shabaya & esikhungweni sebhizinisi lase-West Surabaya. Leli fulethi liphakathi kwezitolo ezinkulu ezingu-2, i-Pakuwon Supermall Indah & Pakuwon Trade Centre.
Izivakashi zingajabulela izindawo ezihlukahlukene zokuzijabulisa nezikhungo zokuthenga ezizungeze indawo. I 29m2 efulethini has LED TV izindawo, ukhululekile & imibhede emikhulu, ikhishi, ifriji & yokugezela ifakwe hot & amanzi abandayo eshaweni.
Ifulethi le-Paneya @Anderson linikeza indawo engenawo umusi kuyo yonke indawo yegumbi kanye nebhalkhoni, indawo ekahle yasebusuku, isakhiwo esisha esinezinsizakalo zezinga eliphezulu, indawo yokwamukela izivakashi enethezekile, indawo yokubhukuda engapheli, indawo yokuzivocavoca eyenzelwe izivakashi kuphela, umkhondo wokugijima, ukufinyelela ngokuqondile enxanxatheleni yezitolo, ikhadi lokungena kuwo wonke amakheshi nesistimu yokuphepha yamahora angu-24.
I-Paneya @Anderson Apartment iyindawo ekahle kakhulu kubantu bebhizinisi abavakashela i-Surabaya, kanye nezihambi ezithanda ukuthenga, ukudla, ubumfihlo nokuhlanzeka.
Jabulela injabulo yokuhlala efulethini elinamasevisi alingana nehhotela lezinkanyezi ezingu-5.
Izitolo ezahlukahlukene ezitolo zinikeza zonke izidingo zakho. Kusuka ezitolo ezinophawu olukhethekile kuya ezitolo zekhofi ezifana ne-Starbuck, i-D 'journal cafe ne-Jco Donut ngezinyathelo nje ukusuka emnyango wokungena endaweni yokwamukela izivakashi.
Ukudla kwe-Hypermart - turun 1 lantai.
Salon kecantikan (Arie&Harry, Shinjuku, Christopher, Jhony Andrean, dll) - naik 1 lantai
UHarry Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Kecamatan Sambikerep namaphethelo